सीपीएलको ड्राफ्ट आज, नेपाली क्रिकेटरको सम्भावना कति ? – हाम्रो देश
सीपीएलको ड्राफ्ट आज, नेपाली क्रिकेटरको सम्भावना कति ?
काठमाडौं, ८ जेठ । चार नेपाली खेलाडी पनि ड्राफ्ट सूचीमा परेको क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) को ड्राफ्ट आज लन्डनमा हुँदैछ । नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः४५ मा शुरु हुने उक्त ड्राफ्टबाट नेपालबाट विदेशी फ्रान्चाइज लिग खेल्नको लागि सन्दीप पछिको दोश्रो क्रिकेटर को बन्ने भन्ने फैसला हुनेछ ।
ड्राफ्टमा स्टार लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने सहित, युवा खेलाडीहरु दिपेन्द्र लामिछाने, रोहित पौडेल र सोमपाल कामी रहेका छन् । सन्दीपले यसअघि सीपीएलमा आफ्नो कौशल देखाइसकेका छन् ।
सन्दीपले खेलेको सेन्ट किट्समा पछिल्लो समय नयाँ लगानीकर्ता आएसँगै नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ । अघिल्लो नेतृत्वबाट यस वर्षको फेब्रअरी महिनामा हङकङको कम्पनी सिटी स्पोर्टस् ग्रुपले सम्हालेको छ । सिटी स्पोर्टस् ग्रुपले नै हङकङको काउलून क्यान्टोन्स क्लब सम्हालेको छ । सन्दीप र अष्ट्रेलियाको पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्कले सन् २०१६ मा यहि क्लबबाट हङकङ टी–२० ब्लीट्ज खेलेका थिए ।
यूवा खेलाडीलाई फ्रान्चाइज टोलीले विशेष महत्व दिने भएकाले अन्य नेपाली खेलाडीको सम्भावना पनि रहेको छ । विशेषगरी पेस बलिङ र तल्लो क्रममा ब्याटिङ गर्ने क्षमताको कारण सोमपाललाई कुनै टोलीले लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यस्तैगरी अलराउन्ड क्षमताका दीपेन्द्र ऐरी र रोहित पौडेल पनि राम्रो विकल्प हुन् । न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्न पाइने भएकाले यि खेलाडीको थोरै सम्भावना रहेको नकार्न सकिंदैन ।
यस सिजनको ड्राफ्टमा चार नेपाली खेलाडी सहित कुल ५ सय ३६ खेलाडी ड्राफ्टमा परेका छन् ।
वेष्ट इन्डिज बाहेक अन्य २० देशका खेलाडीहरु सूचीमा परेका छन् । सीपीएल ड्राफ्टमा नेपालबाहेक अफगानिस्तान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, बर्मुडा, क्यानडा, इंग्ल्याण्ड, हङकङ, भारत, आयरल्याण्ड, केन्या, न्युजिल्याण्ड, ओमान, पाकिस्तान, स्कटल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, युएई, अमेरिका, जिम्बाबे र वेष्ट इन्डिजका खेलाडी रहेका छन्।